RxSense သည် Forbes မဂ္ဂဇင်းမှအမေရိက၏ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အကောင်းဆုံးအမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်ဆုကိုရရှိခဲ့သည် - ကုမ္ပဏီ | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ပြင်းထန်သောအားကစား မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း
အဓိက >> ကုမ္ပဏီ >> RxSense သည် America's Best Startup Employers 2021 ဆုကိုရရှိသည်
RxSense သည် America's Best Startup Employers 2021 ဆုကိုရရှိသည်
Forbes မဂ္ဂဇင်း RxSense ကိုရွေးပါ—SingleCare ၏မိခင်ကုမ္ပဏီ2021- များအတွက်အမေရိက၏အကောင်းဆုံး startup အလုပ်ရှင်တစ် ဦး အဖြစ် တစ်တန်းအတွက်ဒုတိယနှစ်တွင် ! အိမ်က ၁၄၈ နေရာ၊ ၂၀၂၀ မှာထက်တောင်ပိုတယ်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း နှင့် Statista ကလယ်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းဖို့ထက်ပိုမို7သန်းဒေတာအချက်များသုံးပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများမှ 500 ရွေးချယ်ထားကြသည်။ သူတို့ကအဓိကအစီအမံသုံးခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်:
RxSense သည်ဘော်စတွန်၊ နယူးယောက်၊ Palm Beach ဥယျာဉ်နှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိအခြားမြို့များမှလူ ၂၅၀ ကျော်ကိုအလုပ်ခန့်ထားသည်။ သင် SingleCare နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လူများအား၎င်းတို့၏ဆေးဝါးများကို ၈၀% အထိသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည့်လျှော့စျေးကဒ်များကိုကမ်းလှမ်းသောဆေးညွှန်းငွေစုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နီးပါး 1 မှာ4လူများသည်သူတို့သည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုကုသရန်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများအတွက်အခကြေးငွေပေးရသည်။ COVID-19 ကူးစက်မှုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်သောအခါပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်လိုအပ်သည့်ဆေးဝါးများ၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်ဆေးညွှန်းလက်လှမ်းမှီမှုနှင့်လိုက်နာမှုကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်သည်။ မင်းကုန်ကျစရိတ်
ဘယ်လိုလဲ? RxSense နှင့် SingleCare သည်ဆေးညွန်းစရိတ်၏အနက်ရောင်သေတ္တာထဲကိုအလင်းကိုထွန်းလင်းပေးသည်။ သင့်အနီးရှိဆေးဆိုင်များမှငွေစုများကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်စေရန်အနိမ့်ဆုံးစျေးကိုရွေးချယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ Rx ကိုကောက်ယူသောအခါသင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကူပွန်ကိုဆေးဆိုင်ကောင်တာသို့ယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုးရှင်းပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ CVS၊ Walgreens နှင့် Walmart တို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏မဟာဗျူဟာမြောက်ဆေးဆိုင်မိတ်ဖက်များနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ကျမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သန်းချီသောသုံးစွဲသူများအားပိုမိုကျန်းမာသောဘဝများရရှိစေရန်ဖြစ်စေသည်။
ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေဆီကယူပြီးကမ္ဘာကြီးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။
SingleCare မှဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Pavel Nabatchikov ကကျွန်တော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရသူများကိုကြိုက်ပါတယ် ငါကုမ္ပဏီနှင့်ထုတ်ကုန်ကြိုက်တယ်။ ငါမြင့်မြတ်သော, အဓိပ္ပါယ်ရှိသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားရဖို့ဝမ်းသာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအဝတ်အစားတွေကိုရောင်းရုံသာမကလူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေကိုပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးနေတာပါ။ ဒါကအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။
သက်ဆိုင်သော: SingleCare ဖောက်သည်များအားကူညီခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်
SingleCare မှအကောင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူး Alanna Inniss ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်နေလုပ်နေသည့်လူများအားသူတို့၏ Rx ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကူညီပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။
SingleCare မှကူညီထောက်ပံ့ပေးသောအထူးကုဂျက်ဖရီဘူလော့ခ်ကကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာသည်လူတို့၏ဘ ၀ ကိုထူးခြားစေသည်။ တစ်နေ့ကိုဖောက်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပါတယ်။ ငါသူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီကဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုငါပြောပြနိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့သိပြီးသားအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပေးဖို့ကြိုးစားတာကငါ့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနိုးထဖို့၊ အလုပ်သွားဖို့၊
သက်ဆိုင်သော: ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး SingleCare ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်ဖုန်းများအား ၀ န်ထမ်းများ
အပြည့်အစုံဖတ်ပါ Forbes မဂ္ဂဇင်း အင်္ဂါရပ်များနှင့်အခြားဆုရရှိသူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူ, ဒီမှာ ။ သင်သည်အလုပ်များကိုကြည့်ရှု။ လျှောက်ထားနိုင်သည် တစ်ယောက်တည်း နှင့် RxSense LinkedIn ဒါမှမဟုတ်ငါတို့အပေါ် ဤနေရာတွင် Jobs Jobs ။
Cystitis vs. UTI: အကြောင်းရင်းများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကုသမှုများနှင့်အခြားအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ
ပျို့ခြင်းနှင့် ၀ မ်းဗိုက်အောင့်ခြင်းအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ
sinus ကူးစက်မှုအတွက် augmentin vs z အထုပ်
အမျိုးသားတစ် ဦး အတွက်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ဘယ်လောက်လဲ